Bartamaha Webmaster-ka Google Waxay Helaan Casriyeyn Culus | Martech Zone
Wednesday, April 28, 2010 Arbacada, Nofeembar 5, 2014 Douglas Karr
Intii aan la shaqeynayay macmiil saaka, ayaan galay Bartamaha Webmaster Google si aad u eegto weydiimaha ugu sareeya ee raadinta taraafikada. Waxa aan ogaaday waxay ahayd hal heersare ah oo casriyeyn waxtar leh!
Halkii si fudud loo siin lahaa ereyada muhiimka ah, jagooyinka iyo guji-socodka, Google waxay kor u qaadday is-dhexgalka is-dhexgalka qaabka Google Analytics. Maaddaama darajaynta ay hadda ku kala duwan tahay iyadoo lagu saleynayo astaamaha raadinta shaqsiyeed, Google hadda waxay ku siineysaa kala duwanaanshaha boosaska URL-kaaga laga helay, iyo sidoo kale tirada guud ee dareenka iyo heerka gujinta.
Shirkado aad u tiro badan ayaa iska indhatira qiimeyntooda raadinta iyo qiimaha gujinaya ee bogga natiijooyinka mashiinka raadinta (SERP). Sida aad ugu hagaajin laheyd boggaaga si aad u kordhiso beddelaad, waa inaad sidoo kale u fiicnaataa cinwaanka boggaaga iyo sharaxaadda meta si aad u kordhiso beddelaad Haddii aad darajaynayso # 1 illaa # 3 oo aad ka hooseyso 10% qasabadaha, waxaad haysataa xoogaa shaqo ah oo aad qabato. Waa inaad heshaa 50% iyo wixii kabadan!
Qalabkan cusubi waa muuqaal weyn oo muuqaalka xogta ah. Mar alla markii aan awooday inaan dib ula eego macmiilkeyga subaxnimadii, waxaan arki karnay fursadda cajiibka ah ee naga horreysa ee wadista baaxad weyn oo taraafikada goobta oo leh hagaajin iyo darajo hagaajin leh.
Ha dagin Analytics si aad ugu hagaajiso bartaada beddelaad - u qaado tallaabo hore oo aad u hubiso inaad si buuxda uga faa'iideysanayso makiinadaha raadinta marka hore. Falanqaynta waxay ku siineysaa oo keliya faahfaahinta booqdayaasha dhab ahaantii riix-dhex-maray the maahan kuwa looga tagay!
Tags: kamarad +hashtagsicirka-ku-gaadhiga wareegapublisherhalleeyo lillaahinimadaSliderdurdur
Apr 28, 2010 at 9: 01 AM
Haa. Waxaan arkay isbadalka dhow. Aad baan u faraxsanahay. Kadib waan sii eegay. Waxaan jeclaan lahaa inay wax yar ka qaban karto xogta sida ii sheeg barnaamijka Google ee qiimeynta ay ka imaaneyso.
Ilaa iyo inta boggeygu si dhab ah ugu qiimeeyo bogga 1 ee ereyga "zombies," "Hookah Lounge," "Wrigley Field," iyo "Karen Gillan."
Waxaan ku qoray boostada SEOBoy hadaad rabto inaad fiiriso (maya tani maahan khiyaano raqiis ah oo lagu kasbado taraafikada. Dhamee aqrinta aqriska cajiibka ah ee Tech Tech Blog kahor intaadan xitaa KAFTARIN inaad gujiso http://bit.ly/de6Ot9).
Waxaan u baahanahay inaan u dhaadhaco Indy oo aan arko y'all.